You are here: Home /Barcelona, Wararka Maanta, Wararka Suuqa Kala Iibsiga Barcelona Oo Isbuucyada Soo Aadan Heshiis Cusub Ka Dalban Doonta Samuel Umtiti Iyadoo Ka Cabsi Qabta In La Jabiyo Heshiiskiisa Lacagta Yar.
Sunday July, 15 2018 - 22:07:09
Monday January 01, 2018 - 16:52:08 in by Burco Office
Barcelona ayaa qorsheyneysa iney heshiis cusub oo lagu xiri doono heshiis jabin adag ka saxiixi doontaa daafacooda reer FranceSamuel Umititisi ay uga badbaadaan baacsiga baacsiga ay ku hayaan xidigaan kooxaha qaar.
24-jirkaan reer France wuxuu haatan qaadanayaa xilli ciyaareedkiisii labaad, balse wuxuu Camp Nou ka noqday mid lama taabtaan ah isagoo si weyn u xasiliyay daafaca kooxda xilli ciyaareedkan walow uu haatan dhaawac kaga maqan yahay garoomada.
Qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah waxey keentay in kooxo ka dhisan horyaalka Premier League ay durba ku bilaabaan baacsi, madama kaliya xidigaan lagu heli karo haatan aduun dhan 50 Malyan oo Pouond.
Barcelona haatan waxey diyaar u tahay iney heshiis cusub ka dalbato si ay uga hortagto in raqiis lagu helo, sida uu qoray wargeyskMarcaee kasoo baxa magaalada Madrid.
Wargeyska wuxuu warbixintiisa ku sheegay in kooxda Camp Nou ka dhisan maamulkeeda ay bilaabi doonto hawshaan isbuucyada soo aadan, waxaana la hubaa in bishaan January ay soo afjari doonaan si ay uga baxaan cabsida ku aadan in lacago yar looga qaato.
Samuel Umititi haatan wuxuu ku maqan yahay dhaawac waxaana la filayaa inuu garoomada kusoo laabto dhamaadka January ama horaanta February.
Don Balon ayaa qirtay in Barcelona ay si weyn cabsida ugu korortay markii Liverpool ay daafaca ugu qaalisan aduunka ka dhigeen Virgil van Dijk.
Daawo:muuqaal shabeel saadaaliyay wadanka guulaysanaya ciyaarta dhex maridoonta england vs cruatia
11/07/2018 - 17:53:01
Hargeysa:Daawo Wiil Hargeysa Gudaheeda ka bilaabay Ganacsi cusub oo Bulshada ka yaabiyey + Wuxu Ganacsigaasi yahay
11/07/2018 - 08:23:55